Myat Shu - 2011 September 03
You are here : Myat Shu » Archives for September 3rd, 2011
လုပ်ငန်းရှင်များ လွှဲပြောင်းရယူပြီးပါက မြို့ပတ်ရထားဈေးနှုန်း ဆယ်ဆသာ တက်ခွင့်ရမည်
Published By Myat Shu On Saturday, September 3rd 2011. Under သတင်းတိုများ
ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထား ပြေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းအား တိုင်းရင်းသား ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်များသို့ လွှဲပြောင်းပြီးပါက လက်ရှိ မြို့ပတ်ရထား ပြေးဆွဲနေသော ဈေးနှုန်း ၁၀ ကျပ်နှင့် ၂၀ ကျပ်တို့၏ ဆယ်ဆထက် တိုးမြှင့်ခွင့်ပြုမည် မဟုတ်ကြောင်း မြန်မာ့မီးရထား၏ တရားဝင်ထုတ်ပြန် ကြေငြာချက်များအရ သိရသည်။ “ခရီးသည်တွေအတွက် ၀န်ဆောင်မှုတွေနဲ့ လုံခြုံရေးကိုတော့ လုပ်ငန်းရှင်တွေကပဲ စီမံရမှာပါ။ ရထားသန့်စင်ခန်းနဲ့ နားနေခန်းတွေကိုတော့ လုပ်ငန်းရှင်က ကန်ထရိုက်စနစ်နဲ့ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဘူတာတွေမှာလည်း မြန်မာ့မီးရထားက သဘောတူတဲ့ အခြားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ခွင့်ပေးထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ လုပ်ငန်းတွေရဲ့ သက်တမ်းက တော့ မြို့ပတ်ရထား လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ရတဲ့ သက်တမ်းနဲ့အညီလို့ သတ်မှတ်ထားတယ်” ဟု ရန်ကုန်ဘူတာကြီး ရုံပိုင်ချုပ် ဦးအောင်သန်းကျော်က ... Continue Reading
ပုဂ္ဂလိက စက်သုံးဆီဆိုင်များတွင် စမတ်ကတ်ဖြင့် ဆီဝယ်ယူနိုင်တော့မည်
သြဂုတ်လကုန်ပိုင်းမှ စတင်ပြီး ရန်ကုန်မြို့အတွင်းရှိ ပုဂ္ဂလိက စက်သုံးဆီ အရောင်းဆိုင် ၃၀ တွင် စမတ်ကတ်ဖြင့် ဆီထုတ်ယူမှု ပြုလုပ်နိုင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ စက်သုံးဆီ တင်သွင်းရောင်းချသူများအသင်းမှ သိရသည်။ စက်သုံးဆီ ထုတ်ယူခွင့် ဆီစာအုပ် အစားထိုးအဖြစ် ဆီထုတ်ယူခွင့် စမတ်ကတ်များကို ယခုလအတွင်း စမ်းသပ်ကာလအဖြစ် စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် စမတ်ကတ် အရေအတွက် ၅၀၀ ၀န်းကျင်ကို ကားအစီးရေ ၅၀၀ အတွက် ပြုလုပ် ရောင်းချပေးထားပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ စမတ်ကတ်ပြုလုပ် ရောင်းချမှုကို လာမည့် စက်တင်ဘာလမှ စတင်ကာ စမ်းသပ်ကာလ လွန်မြောက်မှုအဖြစ် တစ်လလျှင် ကားအစီးရေ တစ်ထောင် ထုတ်လုပ်ရောင်းချပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ကုန်သည်/စက်မှု အသင်းချုပ်ရုံးတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် စက်သုံးဆီ ... Continue Reading
ကျောတစ်ခင်း ငါးရာနှင့် ကားရေဆေးလျှင် ဒဏ်ငွေတစ်သောင်း
နယ်မြို့များမှ ရန်ကုန်မြို့တွင် လာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူအချို့မှာ အခန်းငှားစရိတ်များ ကြီးမြင့်လာ၍ စုပေါင်းအခန်းငှား နေထိုင်ရန်ပင် အခက်အခဲ ကြုံလျက်ရှိကြောင်း သိရပါသည်။ ယင်းသို့ လက်လုပ်လက်စား လူတန်းစားများ နေထိုင်ရန် ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်နှင့် ကမာရွတ်မြို့နယ်များရှိ ဟောပုံစုံ (Hall Type) အခန်းများတွင် တစ်ဦးလျှင် ငါးရာကျပ်နှုန်းဖြင့် ညအိပ်လက်ခံသော အဆောင်များ အလုပ်ဖြစ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ “တစ်ညကို ငါးရာပေးရတယ်။ အစ်ကိုတို့က လင်မယားနှစ်ယောက်ဆိုတော့ တစ်ညကို တစ်ထောင်ကျတယ်။ အခန်းငှားပြီး နေတာထက် သာတာက ပိုက်ဆံကြိုပြီး ပေးစရာ မလိုဘူး။ အခု ဒီမှာ နေတာကတော့ တစ်ညမှ တစ်ခါ ရှင်းရတယ်။ အခန်းငှားရင် အနည်းဆုံး ခြောက်လစာ ကြိုပေးရတယ်။ အခုကတော့ အဲလောက်ကြီး မတတ်နိုင်တော့ဘူး။ ... Continue Reading
နောက်ကျောမလုံသော INGO တစ်ခုအား ရိုးသားရဲ့လားဟု မေးခွန်းများ ထွက်ပေါ်နေ
မန္တလေးမြို့ရှိ အမေရိကန် အခြေစိုက် HIV/AIDS ရောဂါ ကာကွယ်ရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော နာမည်ကြီး နိုင်ငံတကာ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်း ပြီးခဲ့သော အပတ်မှ စတင်၍ ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ဖြစ်ပွားနေကြောင်း မန္တလေး INGO လောကမှ သတင်းရရှိပါသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ လွန်ခဲ့သောအပတ်က ၎င်းတို့၏ ရန်ကုန်ရုံးချုပ်မှ ဌာနေကိုယ်စားလှယ်၏ စေခိုင်းချက်အရ အုပ်ချုပ်ရေးဌာန ဒါရိုက်တာနှင့် ဆရာဝန်ကြီးတစ်ဦးက မန္တလေးသို့ ရုတ်တရက် ရောက်ရှိလာပြီး ၎င်းအဖွဲ့မှ ၀န်ထမ်းများအား အရေးပေါ် အစည်းအဝေး ခေါ်ယူကာ အဖွဲ့၏ အတွင်းရေးများ၊ လျှို့ဝှက်ချက်များ၊ အဖွဲ့ရှိ နိုင်ငံခြားသားများ သိက္ခာကျဆင်းစေမည့် သတင်းအချက်အလက်များကို အဖွဲ့ပြင်ပသို့ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်း မပြုရန် အကျပ်ကိုင်၍ ခံဝန်ကတိစာချုပ်ရေးထိုးခိုင်းရာမှ စတင်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Saturday, September 3rd 2011. Under ၀တ္ထု, စကားပြေလက်ရာသန့်, အမှတ်တရ
ကျွန်ုပ်သည် တစ်ခါက ဟင်္သာတမြို့ပိုင် မဲဇလီကုန်းအရပ်ရှိ အိမ်တစ်အိမ်၌ တည်းခိုနေစဉ် နံနက် ၁၀ နာရီ အချိန်ခန့်တွင် မိန်းမရွယ်ရွယ်တစ်ယောက် အိမ်ရှေ့သို့ ရောက်လာ၍ အင်္ဂပူကို သိလျှင် ပြောစမ်းပါဟု ဆိုလာလေ၏။ ထိုမိန်းမမှာ အသက် ၂၅ နှစ်ကျော်မျှသာ ရှိသော်လည်း၊ ၃၀ လောက် ထင်ရသည်။ အလွန့်အလွန် ဆင်းရဲသော သတ္တ၀ါ ဖြစ်လေသည်။ တစ်ကိုယ်လုံးမှာလည်း လေးထည်သော အ၀တ်တို့ဖြင့် ဖြစ်ကတတ်ဆန်း ၀တ်ဆင်၍ လာ၏။ အ၀တ်လေးထည်ကား ဦးခေါင်းပေါ်၌ တင်လာသော စောင်တစ်ထည်၊ ၎င်းမှာ ဟောင်းနွမ်းကြာရှည်လေပြီ ဖြစ်သော်လည်း ဖွပ်လျှော်ခြင်းကို တစ်ခါတစ်ရံမျှ အစော်မနံရလေ။ ၎င်းနောက် ချွေးခံအင်္ကျီနှင့် အပေါ်ရင်ဖုံးအင်္ကျီတို့မှာ အညစ်ဆုံးသော ဖုတ်ရောင်ထလျက် ရှိ၏။ ထို အင်္ကျီတို့မှာ ... Continue Reading